कोरोना लकडाउने सम्झाएको विगत - Sabal Post
कोरोना लकडाउने सम्झाएको विगत
१६ बैशाख २०७७, मंगलवार ० बिचार / प्रतिक्रिया
सन्तोष पौड्याल – जब एसएलसी दिने समय नजिक आउंदै थियो, देशमा माओवादीको सशष्त्र युद्ध चलिरहेको थियो । सरकार र माओबादीको त्रासका बिचमा परिक्षा दिनुपर्ने थियो,त्यो पनि सदरमुकाम देखि घरबाट १५ मिनेटको दुरिमा मेरो बिद्यालय थियो । अनि यसपालि गाउंमा म एकजना मात्र थिएं एसएलसीको आइरनगेटलाई तोड्नको लागि तयार सिपाहि । कहिल्यै घर देखि टाढा बस्नु परेको थिएन मलाइ । तर यसपालि भने सदरमुकामको यात्रा अनिवार्य थियो मेरो लागि । किनकि मेरो एसएलसी दिने सेन्टर सदरमुकाम तम्घासमा परेको थियो, घरमा बाबा आमा चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो । भाइबैनिहरु अलि सानै थिए, नभन्दै परिक्षा दिने मिति नजिक नजिक आउदै थियो । घरको जेठो सन्तानको एसएलसी, परिबारमा चिन्ता हुने नै भयो । बाबाले बस चढाई दिनुभो अनि म पनि सबै तयारिको साथमा सदरमुकाम प्रस्थान गरें । परिक्षामा सहभागि हुनको लागि तम्घास पुगेपछि एउटा कोठा भाडामा लियौं । बाहुनी भाउजु, म अनि उहांको साथी सिता । हामि तिन जना उक्त कोठामा बस्ने निधो ग¥यौं । मैले मेरो ओढ्ने ओछ्याउने ब्यबस्था गर्न अर्खले आफन्तिको मा गएं अनि ट्याकटरमा लिएर आएं । ड्राईभर गितमा मस्त थियो ‘चरिले त छाडेर गै गयो सम्झना चै डालिमै रहिरह्यो.’। म चरि जस्तै गुड छाडेर हिंडेको थिएं । सबै ब्यबस्था भयो । सांझ ७ बजेदेखि बाहिर निस्कन नपाउने त्यो समय पनि एक किसिमको लकडाउन जस्तै थियो । कोठा सेट गरियो म खाना पकाउन जानेको थिएं । प्रायः पकाउने काम गर्थें । अरु सबै काम भाउजु र भाउजुको साथिले गर्नु हुन्थ्यो । मेरो परिक्षाको सेन्टर सिद्धार्थ बोर्डिङमा परेको थियो । करिब कोठा देखि १५ मिनेटमा हिंडेर पुगिन्थ्यो । तम्घासको बसाई पनि नौलो र रोचक थियो । हेर्दा हेर्दै परिक्षा पनि सकियो , परिक्षा सकिएको दिन फिल्म हेर्न गइयो, तम्घास घुमियो अनि भोलि पल्ट घर फर्किने तयारि भयो । आफन्तिका सबै सामान बुझाएर घर फर्किने बस चढियो बस पुरै भरिभराउ थियो । छतमा यात्रा गर्नु वाहेक अर्को बिकल्प थिएन । पहिलो पटक डरै डरमा छतको यात्रा तय भयो । करिब दरबार नजिक पुग्दै गर्दा बसको हेल्पर छतमा आयो भाडा उठाउन
। मैले पनि भाडा दिन मेरो पर्स निक्काल्न खोजे ला…… मेरो पर्स नै छैन । हेल्पर म संग पड्कियो । र भन्यो बहाना नबनाउ कि त यहि झारिदिन्छु, सित्तैमा लैजान सक्दिन । अनि मैले भने म ओर्लिने बेला दिन्छु । गाइ गुइ गर्दै झर्किदै कड्किदै हेल्परले सबै संग पैसा उठायो म रातो पिरो हुदै नबोलि बसिरहे । म ओर्लिने ठाउ आयो । ब्याग निकालें । छतमा पर्स भेटिन्छ कि भनेर एक फन्का लगाइ खोजें । मेरो पर्स एकजना अपरिचित यात्रुको ब्यागले च्यापिएको अबस्थामा भेटियो । खुशीको आंशु खसे । अनि ठालु पल्टिदै बसको छत देखि तल झरे हेल्परलाई पैसा दिन्छु भनेको भिडभाडले गर्दा बस कुदाउन लगाउंदै हेल्परले जाउं जाउं गुरु जि भन्दै बसको ठोका ठटायो । मेरो भाडा नै नलिई बस बुटवलतिर कुद्यो । मेरो पैसा नै जोगियो । त्यहा देखि घर जान २५ मिनेट लाग्थ्यो । धेरै बर्षमा आफ्नो घर जान लागेको अनुभुति हुदै थियो । दौडी दौडी घर पुगें । मलाइ देखेर परिवारमा फेरि हर्षका आंशु देखिए । म पनि रोएं । तम्घासका यादका सबै कहानि भन्दै खाना खाएर सुतियो । स्वतन्त्र दिनचर्या, केहिको पनि बोझ थिएन । खायो, खेल्यो घुम्यो, सुत्यो । परिक्षाको नतिजा आउने समय हुदै थियो त्यो बेलामा अहिले जस्तो सहजता थिएन । बारीमा काम गर्दै थियौं । सांझ ३ बजेको समाचारमा रेडियोले खबर फुक्यो– एसएलसीको नतिजा प्रकाशन भएको । होस् हवास कहा पुग्यो पत्तै पाइन एकजना भाइले खबर लिएर मेरो घर आयो दाइ रिजल्ट बिद्यालयको भित्तामा टांस्ने तयारि हुदै छ । सिम्बोल नम्बर हेर्न कुदेर म कसरि पुगें कति समयमा पुगें कुनै पनि कुराको याद छैन । नम्बर खोज्दै जांदा आफ्नो नम्बर देखें । मुटु फुट्ला जस्तो भएको थियो । यति धेरै आबेगमा थिएं म अहिले सम्झिदा पनि अचम्म लाग्छ । चकलेट किनें अनि हस्याङफस्याङ गर्दै बाटामा भेटघाट हुने सबैलाई आफु एस एल सी पास भएको कुरा सुनाउंदै घर पुगें । फेरि सबै जना परिवारमा जम्मा भै हर्षका आंशु बगायौं । आफुलाई धेरै ठुलो काम गरे बाबा मम्मिको मान बढाएं गाउको इज्जत राखें भन्ने अनुभुति भइरहेको थियो । हाम्रो घरमा मिल थियो मेरै नामको । बाबाले मिल चलाउने म पनि सहयोग गर्थे । एसएलसी पास भएपछि अब अर्को तनाब आइ लाग्यो । परिबारमा सल्लाह भयो अब कहां पढ्ने ? अनि अन्त्यमा मेरो अबको पढाई बुटवलमा हुने भन्ने बाबा मम्मिको निस्कर्ष भयो । फेरि पनि चरिले गुंड छोड्ने कुरा भो ।
मनमा अनेक कुराहरु खेल्न थाले । आफु हुर्के बढेको ठाउं । साथि भाइ सबैलाइ छोडेर मुग्लान जान लागेको अनुभुति भइरहेको थियो । तथापि मन सम्हालेर बाबा संग अबको पढाईलाई निरन्तरता दिन गाउंको एउटा ट्रकमा बुटवल हिंडियो । ट्रकमा गित बज्दै थियो, चैते दशै मेलैमा माया बस्यो ख्यालख्यालैमा । बुटवलमा आएर हामि ट्राफिकचौकमा ओर्लियौं अनि गुप्ता होटलमा तन्दुरी नान, पालक पनिर दाल फ्राइ खाइयो । बाबा र म अनि एकजना अंकल (बाबाको साडु भाई) भोलि पल्ट लुम्बिनि बाणिज्य क्याम्पस गएर भर्ना भइयो । मलाइ कान्छी फुपुको कोठामा छोडेर बुबा गुल्मि फर्किनु भो । मेरो कलेजको दैनिकी शुरु भयो । संगसङै म मामाको कम्प्युटर कलेजमा पढ्न सुरु गरें । फुपु संग धेरै बसिन । तिन महिना जति बसेपछि म मामा संगै बस्न लागें । पछि कान्छा मामाको जापानको भिसा लाग्यो अनि कम्प्युटर कलेजमै बस्ने र खाना ठुलो मामाको मै खान थालें । दिनभर म कम्प्युटर कलेजमा नै बस्ने र काम सिक्ने गर्न थालें , १२ पास गरिसके पछि त्यहि कम्प्युटर कलेजमा पढाउने र कम्प्युटर बनाउने गर्न लागें । बैनिलाई पनि बुटवल ल्याएर पढाउने सोंच बनाएपछि बैनि म अनि एकजना गाउंले भाइ मिलेर देबिनगरमा एकतले घर भाडामा लिइयो । दशंै थिएन त्यस वर्ष । हाम्रो हजुरआमा स्वर्गबास हुनु भएको थियो । तै पनि घर पुगेर घुम्न जाने सोच बनाई म दाङ तिर घुम्न निस्कें । फर्केर आउदा मेरो कोठामा चोरी भएछ । चोरले केहि पनि बांकी नराखी सबै सामान चोरछ । फेरि अर्को कोठा भाडामा लिइयो अनि बैनि र म मात्र बस्न लागियो । बैनिको पनि जागिर थियो । मैले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जागिर शुरु गरेको थिएं । मेरो बैंकिङ जागिरको काम पनि सुचना प्रबिधि शाखा थियो म उक्त शाखाको प्रमुख भएर करिब उक्त संस्थामा ६ बर्ष बिताएं । यसै बिचमा मलाई राजेश हमाल हिरो भएर पर्दामा छाएजस्तै म्युजिक भिडियोमा हिरो बन्ने हुटहुटि चल्यो । अनि के खोज्छ्स काना आंखो भने जस्तै भयो । हितान शुक्र भन्ने दाइ संग एक दिन यस्तै प्रसंगमा कुरा निस्कियो । दाइलाई भनें हजुर त मिडिया लाइनको मान्छे मलाइ नि म्युजिक भिडियोमा चान्स दिनुस् न दाइ । अनि दाइले हुन्छ भन्नु भो । अनि सोचें कतै कुनै कम्पनि संग बिज्ञापन माग्न सके त झन राम्रो ।
दाइलाइ पनि सहयोग हुने म पनि हिरो बन्ने । पोखराको एकजना दाइलाइ सम्पर्क गरें अनि सबै कुरा बताएं । उता अर्जुन दाइले पनि हुन्छ भन्नु भो । अनि हितान दाइलाई आएर भनें– दाइ बजेटको लागि चिन्ता नगर्नु म पनि बिज्ञापन मागेर सहयोग गर्छु तपाईलाई तर भिडियो राम्रो बन्नु पर्छ । भिडियो बन्यो एकाएक नसोचेको सपना पुरा भयो । पत्रिकामा न्युज आयो । टिभिमा भिडियो । ओहो बडो खुसि पो लाग्यो । हितान दाइको सहयोगले नसोचेको अर्को सपना पुरा भयो । यसै सिलशिलामा पत्रकार टि.आर. शर्मा उहां पत्रकार हुनुहुन्छ उहांले मेरो म्युजिक भिडियो फोटो लगायत अन्य मेरो फोटो लाई त्यो बेलाको हटकेक भन्छु म कान्तिपुरको शुक्रवार साप्ताहिक लगायत अन्य स्थानिय पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्दिनु भएको थियो । सबै गरि करिब १५ वटा म्युजिक भिडियोमा हालका चर्चित कलाकारहरु संग म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने मौका जुरेको थियो । बिन्ध्बासिनी म्युजिकका सञ्चालक सुवास रेग्मीले पनि यो यात्रामा धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यस्तै मित्र गायक राजु ढकाल,देबि घर्ति संग त गायक बन्ने हुटहुटिले मेरो आफ्नै शब्दमा एल्बम नै निकाल्न्न पनि सफल भएं । अनि म्युजिक भिडियोको नायक हुदै गायक सम्म भएं । त्यो पनि आफ्नो गितको , । जिन्दगी चलिरहेकै थियो अनि जागिर पनि परिबर्तन भै रहेको थियो यसै सिलसिलामा म बैबाहिक जिबनमा बांधिन पुगें अनि मेरो सांङ्गितिक यात्रामा पुर्णविराम लागेको छ । राजधानिमा जागिर हुंदा फ्याट्टफुट्ट समय मिलेको बेला सांङ्गितिक माहोलमै रमाउने अनि फुर्सदिलो बेला सुटिङ गर्न स्याङ्जासम्म पुग्थें म । श्रीमतिको पनि बैंकको जागिर अनि आफ्नो पनि । सबै साथिभाइका छोरा छोरि देख्दा डाहा लाग्थ्यो भाग्यबस हाम्रो पनि छोरीको आगमन भयो । बैंकको जागिर कहिल्यै फुर्सद मिलेन । छोरि संग रमाउने । यसैक्रममा छोरि पनि २१ महिना पुरा गरिन् । विश्वमा नयां तरङग आयो । त्यो पनि कोरोना भाइरसको । बाजे बज्यैका पालाका अनेकौं गफ सुनेर आनन्द मिल्थ्यो । अनेक रोगहरु सुनियो तर यस किसिमको रोगको बारेमा कहिल्यै सुनेको थिइन । तर आफैले भोग्दैछु अहिले । जिन्दगिमा धेरै उतार चढाब हरु आए । राम्रा नराम्रा अनेकै दुख अनि कष्ट भोगियो सुनियो । यति फुर्सदिलो समय आजसम्म मिलेको थिएन । किताब पढ्ने, फिल्म हेर्ने सोसल साईटमा रमाउने, इमेल इन्टरनेटको मजा लिने, मिठो मसिनो खाने सबै कुरा पुगेको छ आज । जिन्दगिमा धेरै उतार चढाब हरु आए । आहा भन्ने भन्दा पनि डाहा गर्ने हरु धेरै भेटें मैले । कमै मान्छे भेटघाट भए । यहा सम्मको जिबनमा जस्ले हौसला दिए, ज्ञान दिए, उर्जा दिए, सहयोग दिए ती सबैमा नमन गर्दछु । बांकि भोलिको जिबन सबै देशबासीको सुखमय होस्, कोरोना भागोस् । बिदेशिएका नेपालीहरुले यहि देशको माटोमा सुन फलाउने प्रयत्न गरुन् । जय देश, जय जननी । ( लेखक बैंकर हुन् )
ब्यावसायीहरुले उपमहानगरसंग ग्रील ग्रामको माग
बालविवाह रोक्दै किशोरी समूह
क्यान इन्फोटेक २०१९ को तयारी पुरा
स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शेर्पाले सम्हालिन् कार्यभार
पुर्व मन्त्री मुसलमानद्धारा स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री प्रदान
एनआईसी एसिया र बुटवलको मर्सी सिटी हस्पिटलबीच…
अग्रज पत्रकार भट्टराईकाे नेतृत्वमा गठन भयाे रुपन्देहीमा प्रचार समिति
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपालकै दोस्रो लामो पुलको उद्घाटन
विभाजित नेकपालाई आधिकारिक नमान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
मुसिकोट नगरपालिकाले खानेपानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिएको छ– नगरप्रमुख…
इनरव्हिल क्लबद्वारा पीडितलाई सहयोग
नवलपरासीमा पाच लाख मूल्य बराबरको अवैध मालसामान बरामद
महिला भलिबलको उपाधि कुंवरवर्तीलाई
प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दै
‘अरबको खाडी’बोलको गीत सार्वजनिक
गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेशन